Baiboly pejy 663 - Ny Baiboly
Voalohany < 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 Manaraka Farany
1 Korintiana toko 12 (tohiny)
12Fa toy ny maha-iray ny vatana, na dia maro rantsana aza, sy toy ny maha-vatana iray ny rantsam-batana, na dia maro aza izy, dia toy izany koa ny Kristy. 13Fa Fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika rehetra, mba ho vatana iray ihany isika, na Jody na jentily, na andevo na olom-potsy; ary Fanahy iray ihany no nampisotroana antsika rehetra.
14Koa ny vatana dia tsy rantsam-batana iray ihany, fa maro. 15Raha ny tongotra hanao hoe: Tsy isan'ny vatana aho, satria tsy tànana, dia izany ve no tsy haha-isan'ny vatana azy? 16Ary raha ny sofina hanao hoe: Tsy isan'ny vatana aho, satria tsy maso, dia izany ve no tsy haha-isan'ny vatana azy? 17Raha maso avokoa ny vatana, inona indray no ho fandrenesana? Ary raha fandrenesana avokoa, inona indray no ho fanamboloana? 18Rantsam-batana maro anefa no efa nalahatr'Andriamanitra eo amin'ny vatana, araka izay itiavany azy avy. 19Ka raha rantsam-batana iray ihany izy rehetra, aiza izay vatana? 20Koa maro àry ny rantsam-batana, fa iray ihany ny vatana. 21Ny maso tsy mahazo manao amin'ny tànana hoe: Tsy mila anao aho; ny loha tsy mahazo milaza amin'ny tongotra hoe: Tsy mila anareo aho. 22Fa ny rantsam-batana izay miseho ho malemilemy kokoa aza no vao mainka ilaintsika kokoa; 23ary ny rantsam-batana izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa aza no omentsika voninahitra bebe kokoa. Koa ny tsy misy hajany ao amintsika no hajaintsika kokoa; 24fa izay mendrika rahateo tsy mila izany. Satria tamin'ny nanaovan'Andriamanitra ny vatana, dia izay kely voninahitra kokoa no nalahany homena voninahitra bebe kokoa, 25mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny vatana, fa mba hifanasoa avokoa ny rantsam-batana rehetra. 26Koa raha mijaly ny rantsam-batana iray, dia miara-mijaly avokoa ny rantsam-batana rehetra; fa raha mahazo voninahitra kosa ny rantsam-batana iray, dia miara-mifaly ny rantsam-batana rehetra.
27Hianareo no vatan'ny Kristy, ka samy rantsam-batany manaraka ny laharany tsirairay avy. 28Ao amin'ny Eglizy dia izao no nandaharan'Andriamanitra ny sasany: voalohany Apostoly, faharoa mpaminany; fahatelo mpampianatra; manaraka izany dia ireo nahazo fanomezana hanao fahagagana, hahasitrana ny marary, hanampy, hitondra, hiteny fiteny samihafa tsy fantatra, handika teny. 29Moa Apostoly izy rehetra? Moa mpaminany izy rehetra? Moa mpampianatra izy rehetra? 30Moa manao fahagagana izy rehetra? Moa nahazo fanomezana hanasitrana izy rehetra? Moa miteny fiteny samihafa tsy fantatra izy rehetra? Moa mandika teny izy rehetra?
31Fa ny fanomezana ambony indrindra no irio mafy, dia izao làlana tsara indrindra hatoroko anareo izao.
8Ny fitiavana dia tsy hanam-pahataperana. Fa raha ny faminaniana kosa dia hisy farany, ny fitenenana fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, ary ny fahalalana dia hiato. 9Satria tapany ny fahalalantsika, tapany koa ny faminaniantsika: 10ka rahefa tonga ny feno dia foana ny tapany. 11Fony mbola zaza aho, dia niteny toy ny zaza, nihevitra toy ny zaza, nisaina toy ny zaza; fa nony olon-dehibe aho dia nialako ny fanahin-jaza. 12Ankehitriny mizaha ao amin'ny fitaratra isika, ka tsy mahita mazava; fa rahatrizay, hifanatrika; ankehitriny, tapany no fantatro; fa rahatrizay, hahalala tsara toy ny nahafantarana ahy aho. 13Ary ankehitriny, ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana; fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo.
1 Korintiana toko 14
Ny amin'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra - Ilaina kokoa ny faminaniana sy fandikan-teny - Fitsipika harahina raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, na maminany - Ny amin'ny vehivavy ao am-piangonana.
1Miezaha mitady ny fitiavana; fa maniria koa ny zava-panahy, fa indrindra ny faminaniana. 2Fa izay miteny amin'ny teny tsy fantatra, dia tsy miteny amin'ny olona fa miteny amin'Andriamanitra, satria tsy misy mahalala izay lazainy, fa fanahy no itenenany zava-miafina. 3Ary izay maminany kosa, dia miteny amin'ny olona ka mahasoa ny fanahiny, mankahery azy, ary manala alahelo azy. 4Izay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia mahasoa ny tenany ihany; fa izay maminany kosa dia mahasoa ny Eglizy. 5Koa tiako ny hitenenanareo rehetra amin'ny fiteny tsy fantatra, nefa aleoko aza ny haminanianareo; satria ny maminany no ambony noho ny miteny amin'ny teny tsy fantatra, afa-tsy raha adika ny teniny, mba hahazoan'ny Eglizy soa.
6Hevero ange, ry rahalahy: raha mankany aminareo aho, ka fiteny tsy fantatro no itenenako, fa tsy fanambarana, na fahalalana, na faminaniana, na fampianarana no itenenako aminareo, inona no soa ho vitako aminareo? 7Raha tsy feo miavakavaka mazava no avoaky ny zavatra tsy manana aina, toy ny sodina na lokanga, ahoana no hahafantatrana izay hira atao, na amin'ny sodina, na amin'ny lokanga? 8Ary raha feo hafahafa no avoaky ny trompetra, zovy no hioman-kiady? 9Mba toy izany koa hianareo: raha tsy teny mazava no avoaky ny vavanareo, hatao ahoana no fahalalana izay lazainareo? Dia hiteny amin'ny rivotra hianareo. 10Na maro samihafa aza ny fitenin'ny olona amin'izao tontolo izao, dia tsy misy manam-peo tsy misy heviny na dia iray aza. 11Nefa raha tsy mahalala ny hevitry ny feo aho, dia ho mpiberoberoka foana amiko ilay miteny; ary ho mpiberoberoka foana amin'ilay miteny aho. 12Koa aoka hianareo izay fatra-paniry ny fanomezam-pahasoavana, mba ny hampandrosoana ny Eglizy no hotadiavinareo hananana be indrindra.
13Noho izany, aoka izay miteny amin'ny teny tsy fantatra hangataka mba hahay mandika teny koa. 14Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho, dia mivavaka ihany ny fanahiko, fa ny saiko no tsy mahazo vokatra. 15Hatao ahoana àry? Izao: sady hivavaka amin'ny fanahy aho no hivavaka amin'ny saina koa; sady hihira amin'ny fanahy aho no hihira amin'ny saina koa. 16Fa raha mivavaka amin'ny fanahy fotsiny hianao, hataon'ny ankapobem-piangonana ahoana no famaly amena ny fisaoranao, nefa tsy fantany akory izay lazainao? 17Hianao hahavita fisaorana kanto tokoa, fa ny hafa no tsy hahazo soa.
Pejy: Voalohany < 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3362 seconds